कस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम ? यसोे भन्छ महाशाखा - Lokpath Lokpath
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:०७
कस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम ? यसोे भन्छ महाशाखा
प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:०७
महाशाखाले आगामी २४ घण्टाको मौसम पूर्वानुमान जारी गदै देशका केही स्थानमा मेघगर्जन-चट्ट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा साथै एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नदीमा आकस्मिक पानीको बहाव बढ्नसक्ने र पहाडी भू-भागमा पहिरो जानसक्ने तथा सडक र हवाई यातायातमा सामान्य अवरोध आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपाउन अनुरोध गरेको छ ।
भोलि देशभर आशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै शनिबार देशभरी सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्ट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रही देशका पहाडी भेगका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
पश्चिममा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभाव अझै दुई–तीन पर्ने जल तथा मौसम
काठमाडौं । पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौ । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले केही दिनयता प्रभावित मौसम आजबाट पूर्ण
काठमाडौंको मौसम खुल्यो, आगामी ३ दिनको मौसम कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंको मौसम खुलेको छ । गत एक सातादेखि नखुलेको काठमाडौंको